Cunnada Milatariga - Talooyin ku Saabsan Ragga Casriga ah | Ragga Stylish
Haddii aad jeceshahay cuntooyinka degdegga ah, cuntada millatari waa beddel noocyadaas nidaamyadaas ah ku siiso natiijooyin dhakhso leh maalmo kooban gudahood. Tani waa hal wado oo kale oo lumiyo xoogaa kiilo iyo mug ah maalmahaas halkaas oo xoogaa xad-dhaaf ah ka jireen.
Cunnada millatari way fududahay in la sameeyo oo waa adag tahay. Ku celcelintiisa, waxaa lagugula talinayaa inaad talaabo kasta uqaado si taxadar leh oo faahfaahsan waxaana lagugula talinayaa inaad isboorti sameyso maaddaama ay kalooriyadiisu hooseyso, laakiin qaarna laguguma talin sababtoo ah kaloriinteeda oo hooseysa. Si kastaba ha noqotee, aan si dhow u eegno waxa ay tahay.
1 Waa maxay cuntada militariga?
2 Xagee ka yimaadaa cuntada militariga?
3 Ammaan ma tahay in la sameeyo cuntada militariga?
4 Waa maxay cunnada militarigu sida?
4.1 Maalinta koowaad (1.400 kaloori)
4.2 Maalintii labaad (1.200 kalooriyo)
4.3 Maalinta saddexaad (1.100 kalori)
Waa maxay cuntada militariga?
Waa cunto loogu talagalay in miisaanku lumiyo muddo gaaban gudaheed, xagee lagu qiyaasaa in laga badiyay 3 illaa 5 kiilo wax ka yar toddobaad. Waxay tahay oo noqotay mid ka mid ah kuwa loogu doon doonista badan yahay internetka, maxaa yeelay inta ay dammaanad qaadayso natiijooyinkeeda waxaan jecel nahay inaan raacno oo aan eegno natiijooyinkiisa.
Qorshihiisa ayaa loogu yeedhay 'cuntada badda' o 'cuntada jalaatada' Waxaa lagu baabtiisay qorshe cunno kaloriin oo hooseeya, si miisaankiisu hoos ugu dhaco qaab xaddidan muddo saddex maalmood gudahood ah. Cuntadan waxay ku saabsan tahay cunista cunnooyinka kiimikada la jaan qaadi kara sidaa darteed isku daristoodu waxay dammaanad ka tahay inay jirkaaga sameyn doonaan gub kalooriyadaas oo miisaankaaga dhimo.
Waa in la liqaa muddo saddex maalmood ah qorshe kalori ah inta udhaxeysa 1.000 iyo 1.400 kaloori maalintii ka dibna afarta maalmood ee soo socda si caadi ah wax u cun, laakiin adigoo raacaya cunto yar oo aan xad dhaaf ahayn (oo aan ka badnayn 1.500 oo kalori).
Xagee ka yimaadaa cuntada militariga?
Suurtagal ma ahan in si sax ah loo qeexo halka magaceedu ka yimid, laakiin waa la qiyaasayaa taas Waxaa abuuray Ciidanka Mareykanka ama Navy. Waa cunno loo abuuray in askarteeda ay ku ekaadaan qaab kala duwanaanta cunitaanka jalaatada oo qayb ka ah mid ka mid ah adeegyadooda mid ka mid ah cuntadooda.
Laakiin sidee ayey u yareyn kartaa cunnada kalooriga ahi hay taam ciidan? Hagaag, taasi waa waxa khabiiro badan oo nafaqada lihi ay la yaaban yihiin, in aanu jirin xidhiidh ka dhexeeya cuntadan iyo milatariga, ilaa ma jiro xiriir xigmad leh inta udhaxeysa kalori la'aanta iyo waxqabadka militariga.
Sidaa darteed, sababta kaliya ayaa ah in noqoshada cunnadan adag ay ku xiran tahay habka ay wax u wadaan si aad u shaqeysan oo edeb leh, halkaas oo ujeedadu tahay in laga hor tago qaabkeeda si loo gaaro natiijooyinkeeda.
Ammaan ma tahay in la sameeyo cuntada militariga?
Haa waa amaan in la sameeyo cuntadan, laakiin iyada oo si joogto ah loola socdo ma aha wax aad u wanaagsan. Waa inaad xusuusataa wax muhiim ah, maadaama miisaanka si deg deg ah oo baaxad leh hoos ugu dhacay waqti aad u yar caafimaad ma leh.
Qaabka saxda ah ee loo raaco nidaam kaloriin hooseeya si miisaan loo dhimo waxay noqon doontaa isku day lumiso inta u dhexeysa kiilo iyo kiilo iyo badh usbuuc, iyo qaadashada qaadashada inta u dhexeysa 1.400 iyo 1.500 kaloori maalintii. Intaa waxaa dheer, waa inaad ku dartaa jimicsi ama nooc ka mid ah waxqabadka si jidhku u dedejiyo dheef-shiid kiimikaadkiisa isla markaana uga caawiyo inuu miisaanka u rido si ka wanaagsan.
Laakiin qaabkeeda iyo qaabkeeda wuxuu tilmaamayaa inaysan caafimaad qabin sababtaas darteedna loo dhaliilay. Mar labaad waxay diiradda saaraysaa qaadashada ugu yar ee suurtogalka ah ee kalooriyada iyadoo aan loo eegin baahida loo qabo in la cuno cunnooyinkaas hodanka ku ah fiitamiinnada, macdanta ama nafaqeeyayaalka yar yar, taas oo ka dhigaysa cunto isku dheellitiran.
Waa maxay cunnada militarigu sida?
Cuntada waxaa lagu aruuriyaa soo bandhigida lagu sameeyay bogagga internetka ee kala duwan. Waxaa lagugula talinayaa inaad u sameyso sida loo bixiyay, laakiin waad ku badali kartaa qaar ka mid ah cuntooyinkaaga kuwa kale oo aad isugu eg.
Maalinta koowaad (1.400 kaloori)
Quraac: Cad yar oo rooti ah ayaa ku faafay laba qaado oo sabdo laws ah. Kala badh canab iyo koob shaah ah ama kafee ah.
Cunto: Gabal gabal rooti leh nus koob oo ah tuna tuna qasacadaysan. Koob shaah ah ama kafee ah.
Casho: 85 g oo hilib ah oo ay lasocoto qadarka digirta cagaaran. Tufaax yar iyo moos nus ah. Koob jalaato vanilj ah.
Maalintii labaad (1.200 kalooriyo)
Quraac: jeex rooti ah oo leh ukumo la kariyey. Muuska badh iyo koob shaah ah ama kafee ah.
Cunto: ukun la kariyey oo leh adeeg yar oo queso fresco ah iyo shan jajab. Koob shaah ah ama kafee ah.
Casho: Laba eeyo kulul oo ay la socdaan dhinac dabacasaha iyo broccoli. Muuska badhkiis iyo badh koob oo jalaato ah vanilj.
Maalinta saddexaad (1.100 kalori)
Desayuno: 30 g oo jiis cheddar ah oo leh shan buskud. Tufaax yar iyo koob shaah ah ama kafee ah.
Comida: Cad cad oo rooti ah oo ukunta u kariyey inay dhadhamiso. Koob shaah ah ama kafee ah.
Casho: Waxaa la bixinayaa tuna ah qasacadaysan, moos nus ah iyo hal galaas oo jalaato ah vanilj.
Waa in la ogaadaa in cuntadani ay tahay mid gaar u ah taasna waxaa laga yaabaa inaysan had iyo jeer helin qof walba. Khabiirka nafaqada ama nafaqada ayaa had iyo jeer awoodi doona inuu qiimeeyo nooca cunto taas oo ka sii fiicnaan karta, iyadoo kuxiran jinsigaaga, midabkaaga iyo dheef-shiid kiimikaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Cunto milatari